Popular Singer Khin Phone's Attractive Style & Fashion | Myanmar Singer and Vocalist Photos
Popular Singer Khin Phone's Attractive Style & Fashion
Khin Phone is Myanmar famous female pop singer. Khin Phone released her new album called " Easy Believer" in Burmese called " Youn Lawe Thu" last month. She is one of the famous female singers in Myanmar. Khin Phone isabeautiful and cute girl likeamodel so she has been taking my wallpaper and photos asacover girl. However, Khin Phone said that she would not work asamodel or actress because she is not interested in acting. Khin Phone is stillasingle. She said that she will choose someone who understands her and who is willing to put up with her hectic lifestyle as her lover.
Myanmar popular female singer, Khin Phone's pretty style
Myanmar female pop singer, Khin Phone and her sister.
Khin Phone, Myanmar popular teenage pop singer
သူကတော့ မြန်မာ နာမည်ရ အဆိုတော်မလေး ခင်ဘုဏ်း ပါ။ အဆိုတော်တစ်ယောက် ဖြစ်ပေမဲ့ မော်ဒယ်တစ်ယောက်လိုမျိုး စွဲဆောင်မှုရှိပြီး လှပသူလေးဖြစ်ပါတယ်။ Magazines တွေတော်တော် များများမှာ Cover Girl နေနဲ့ ဖော်ပြခံရသူပါ။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဘုဏ်းကတော့ သူ မင်းသမီး နှင့် မော်ဒယ် အလုပ်တွေကို လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး လို့ဆိုပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကို သူစိတ်မ၀င်စားလို့ပါလို့ ဆိုပါတယ်။ ခင်ဘုဏ်းက ရည်းစားမရှိသေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ သူမက သူမကို နားလည် ပေးတတ်သူ ၊ သူမရဲ့ အလုပ်များတဲ့ အဆိုတော်ဘ၀ကို စာနာ အားပေနိုင်သူမျိုး ကိုဘဲ ချစ်သူအဖြစ် ရွေးချယ်ချင်ပါတယ် လို့ ဆိုပါသေးတယ်။
ခင်ဘုဏ်း ရဲ့ ပထမဆုံး တစ်ကိုယ်တော် အခွေဖြစ်တဲ့ “အယုံလွယ်သူ” စီးရီးက ပြီးခဲ့တဲ့လ ကဘဲထွက်ရှိ ခဲ့ပါတယ်။
AnonymousJanuary 6, 2010 at 4:32 PMi know her boyfriend..very ugly man..animal face nae ayan tu talReplyDeleteရေခဲFebruary 19, 2010 at 4:35 AMအောင်မလေး ငါ့ကို ရက်ရက်စက်စက်ပြောရက်လိုက်တာရုပ်ဆိုးတယ်၊ တိရစ္ဆာန်နဲ့တူတယ် ...တဲ့ ။ဘယ်တုံးကများ ငါ့ကို သိသွားပါလိမ့် .......... :PReplyDeleteAdd commentLoad more...